Ihe kachasị mma 25 bụ ihe eji eche echiche maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ihe kacha mma 25 na-eme ka e nwee Atụmatụ Echiche Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị
Ụdị akịkọ pụtara otu ihe dị mfe; kwụsie ike. A pụrụ igosi nrụgide n'ọnọdụ dị iche iche. E nwere ọtụtụ ebe ndụ na mmadụ nwere ike ịdịgide adịgide, otu ụzọ nke iji mpako na-egosipụta ya bụ site na egbu egbu. Ojiji otutu mmadu na-eji ogbugbu #anchor mee ihe iji kwue akuko di iche iche banyere ihe ha meghariri n'ime ufodu ndu ha.
Ụdị tattoo pụtara
Ụdị tatọ na-anọchite anya ike na nkwụsi ike. Ị hụrụ arịlịka akara n'oge gara aga? Ọ bụ ndị Sumeria malitere mmalite afọ a. Ọnwụ ahụ aghọwo otu n'ime nkwekọ kasị ochie n'ụwa ma Ndị Kraịst oge mbụ jikwa ya mee ihe. Nke a bụ mgbe a kpagburu ha n'ihi nkwenkwe ha. Ọ na-agụnye ọrụ ụgbọ mmiri n'ụgbọ mmiri dị ka ụgbọ mmiri, ike, nchekwa na nchekwa,
A na-eji tatọ arịlịka agwa ọtụtụ akụkọ. Ejiri ya mee ihe iji gosiputa obe ma kwue kwa banyere Jisos Kraist na ahuhu ya n'obe. Ọ na-ekwukwa banyere ikike ụmụ nwoke na ikike nke onye ọ bụla nwere ike iji. Taa, a pụrụ ijikọta arịlịka ahụ na ihe ndị ọzọ iji nye ya ihe ndị ọzọ. A na-eji tattoos ejiri mee ihe na-anọchite anya mmekọrịta ọhụrụ, n'ihi na ọ na-anọchite anya ikike ịnọ na-aga n'oge nsogbu. Ebe ọ bụ na enweghị mkparị banyere akara na 21st narị afọ, njigide arịlịka a ma ama na ọha mmadụ n'ihi ihe ọ pụtara na ihe nnọchianya ya. E nwere mgbe ọ bụla akụkọ maka akpigide arịlịka nke a na-etinye n'ime ahụ. Ọ bụ naanị onye na-ahụ maka ya ga-enwe ike ịkọrọ ndị ọzọ akụkọ ndị ahụ.
1. Ntughari ichikota ihe eji egbu egbu
Ụbọchị ndị a, egbu egbu aghọwo ihe na-adọrọ adọrọ na anyị na-ahụ ka ọtụtụ ndị na-abịa nabata ụdị egbugbu dị ka nke a. Enwere ụdị ahụ abụọ; ihe na-adịgide adịgide ma na-adịru nwa oge. Nhọrọ bụ maka ikpebi.
2. Aka nchikota ntuchi onk echiche maka nwanyi
Ogbugbu na-adịgide adịgide nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ na-agwụ na nká ma o nwere ike ọ gaghị apụ n'ahụ ya ma e wezụga mgbanwe dị ukwuu.
3. Ejighachi ihe ichikota okwu na ozi, Ekwela ka onwe gi ghota
A pụrụ iji ọgwụgwọ laser mee ihe ma ihe mgbu nke ejikọrọ na usoro ahụ bụ ihe na-enye nsogbu.
4. Ejiri aka na-egbuke egbuke egbuke echiche maka umu nwanyi
Nke a bụ ihe mere ndị mmadụ ji atụ egwu ịga ụdị ọrịa a. Ọnụ ego nke ime nke a dịkwa oke ọnụ nke bụ nkwụsị.
5. Azụ azụ nke egbuke egbuke echiche maka igbu ụmụ nwoke
A pụrụ iwepụ nsị egbu oge. A na-etinye pigmenti n'ahịrị akpụkpọ ahụ dị n'èzí bụ nke na-ahapụ agba agba agba. Ị ga-aghọta na ị nwere ike idafu ụfọdụ akpụkpọ anụ gị mgbe ewepụrụ ya.
6. Na-acha obere okooko osisi na arịlịka tattoo echiche na apata ụkwụ
Echegbula banyere mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ ndị furu efu n'ihi na ha ga-etolite n'ime obere oge. Ọ bụrụ na ị na-eche na ị ga-egbu egbu ma ejighị n'aka ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ ihe ịchọrọ ịchọrọ ogologo, gaa maka nhazi oge.
7. Ekebe isi ihe eji egbu egbu maka umu nwoke
Ihe nmetụta nke igbu egbu oge na-adịchaghị mma ma e jiri ya tụnyere ụdị egbugbu na-adịgide adịgide nke na - ewe oge iji gwọọ ya mgbe ọ na - ewepu.
8. Ụdị tattoo tattoo echiche dị nso ikpere
Ikwesighi iwere ngwa ngwa iji tinye onu ogbugbu ma o buru na i kpebiri banyere imewe. Nke a na-egbu egbu site na onye na-ese nkà nke mere ọrụ dị ịtụnanya na #idea nke onye ọrụ.
9. Biceps arịlịka echiche echiche igbu egbu maka ụmụ nwoke
Ị gaghị enwe ihe mgbu ma ọ bụrụ na ọ bụ nhazi oge. Otú ọ dị, maka ndị chọrọ ịnwụcha na-adịru mgbe ebighi ebi, ị kwesịrị ịdị njikere ịtachi obi na nhụjuanya n'oge ọ na-ewepụ ya.
10. Na-acha obere okooko osisi na arịlịka tattoo ink echiche maka aka
Echefula banyere ọbara na-efunahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ nwa oge #design n'adịghị ka eji egbu egbu.
11. Ntughari ichikota echiche na aka
Ị nwetụla mgbe ụdị egbu a mara mma?
12. Jirinụ aka ọkara ejiji tattoo echiche maka ụmụ nwanyị
Oge ịbanye na ya, nlebara anya na ụgwọ bụ ụfọdụ ihe ị nwere ike ịtụle mgbe ị na-aga igbu egbu. Ị nwere ọtụtụ ọchị mgbe ị nwere egbu egbu dị egwu dị ka nke a. Chee echiche banyere ya.
13. Obere ihe na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke maka ụmụ agbọghọ na nkwonkwo ụkwụ
14. Ụdị epeepe omenala na aka
Ị nwere ike ịhụ egbugbere arịlịka nke na-edegharị ya na okwu bụ 'Ezinụlọ' edere na ya. Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịhụ papa ma ọ bụ mama ha. Okwu ndị a na-akọwa ihe gbasara ike na njikọ dịịrị ha. Ị nwere ike ịnọ na mmekọrịta nke kụrụ nkume ahụ ugboro ugboro kama ọ ka na-abịa ime ya. Ihe ị chọrọ inweta bụ akpụkpọ ụkwụ. isi iyi
15. Ejiri obere okooko osisi na ichikota eche echiche echiche
16. Akara anwụrụ egbuke egbuke echiche maka ụmụ agbọghọ
Ihe mbụ ị ga - eme tupu ịnweta igbuchi arịlịka bụ iji chọpụta obere ụdị arịlịka nke ga - adakwasị gị. E nwere ọtụtụ ebe ebe ọnyà ndị a nwere ike izu ike n'ahụ mmadụ. Ọnụ igbu egbu nwere ike ịdabere na ebe ịchọrọ ka etinye ya. Ọbụna akụkụ nke mkpịsị aka ahụ nwere ike ịbụ ebe zuru oke iji hapụ akpị arịlịka gị. isi iyi
17. Dreamcatcher na arịlịka tattoo echiche maka ụmụ agbọghọ na nkwojiaka
A pụrụ ikwu na arịlịka bụ ike nke nwere ike ijide ụgbọ ọ bụla ebe ndị ọrụ ụgbọ mmiri chọrọ ka ọ bụrụ na-agagharị. isi iyi
18. Akara akpụkpọ ụkwụ tattoo design ink echiche maka nwanyi
Taa, ndi mmadu na-achikota akwara mgbochi nke na agwa ha na ha nwere ike iguzo mgbe ihe niile yiri ka ha adighi. isi iyi
19. Di na nwunye ole na ole na-ejigide echiche igbu egbu
Ojiji nke tattoos anchor nwekwara ike ịbụ nkekọ ahụ nke ga - eme ka mmekọrịta dị anya na mmekọrịta; ihe ncheta nke ihe ọma niile nke na-aga ime na njikọ chiri anya n'etiti ndị òtù ezinụlọ. isi iyi
20. Akụkụ nke ihe mgbochi tattoo echiche maka ụmụ agbọghọ
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-egbu egbu egbu egbu, iji mgbochi arịlịka nwere ike ịga ogologo oge n'inye gị nkwupụta ahụ ịchọrọ. isi iyi
21. Nnụnụ na arịlịka igbu egbugbere ọnụ igbu egbugbu maka ụmụ agbọghọ nọ n'ụkwụ
Kedu ka ị ga - esi kwuo okwu ọnwụ? E nwere ebe dịka nkwonkwo, olu na apata ụkwụ ebe ị nwere ike iji egbu egbu. isi iyi
22. Obi na arịlịka echiche echiche igbu egbu na ogwe aka
Ị nwere ike iji ngwongwo, okwu, aghụghọ na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ dochie egbugbu gị. Onye ọ bụla n'ime ihe ndị e ji egbu egbu na-abịa na-adọrọ mmasị. isi iyi
23. Nnụnụ na-efe efe na-ejide ihe nkedo tattoo echiche maka ụmụ nwanyị azụ
Echepụtala aghọwo otu n'ime ụdị ejiji kachasị mma nke ọtụtụ ndị na-aga maka ụbọchị ndị a. Ị gaghị enwe ike ịhapụ egbugbu anchor n'akụkụ ọ bụla nke ahụ gị. isi iyi
24. Ụdị tattoo echiche na ozi, Adịghị emetụ
Lelee ụdị dị iche iche na ịhọrọ nke kachasị mma maka gị. isi iyi
25. Akara anwụrụ akpụkpọ anụ na-egbu egbu egbu egbu maka nwanyi
Pịa ebe a ka ịchọta ụdị tattoo tattoo
na-egbu egbuakara ntụpọEgwu ugoọnwa tattoosegbugbu maka ụmụ agbọghọUche obiAnkle Tattoosdi na nwunyeenyí egbu egbuegbu egbu ebighi ebiarịlịka arịlịkaegwu egwuọdụm ọdụmkoi ika tattooagbụrụ ebondị mmụọ oziechiche egbugbuegbu egbu maka ụmụ nwokeazụ azụegbu egbu okpuaka mma akaNtuba ntugharimma tattoosaka akana-adọ aka mmandị na-egbuke egbukezodiac akara akaraegbu egbu diamondn'olu oluGeometric Tattoosrip tattoosegbu egbu egbunnụnụakwara obiegbu egbu mmiriokpueze okpuezeỤdị ekpomkpaụkwụ akaaka akangwusi pusiima ima mmaegbu egbuụmụnne mgbuegbugbu egbugbuudara okooko osisiegbu egbu hennaakpị akpịenyi kacha mma enyiegbu egbu osisi lotusmehndi imewe